Blogging-ka kuma filna, “Riix Hilibka”! | Martech Zone
Blogging-ka kuma filna, “Riix Hilibka”!
Tuesday, May 27, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Kani waa weedh aan ku daalay - si dhakhso leh - inta lagu guda jiro murashaxnimada madaxweynaha. Ma hubo cidda qalinka ku duugtay ereyga asalka ah laakiin waxaan arkay iyadoo si ballaadhan loo adeegsaday xilligan. Ugu dambayntiina, barasaabka West Virginia wuxuu ereygan u adeegsaday inuu ka hadlo sababta uu Barack Obama West Virginia ugu lumiyay cod aqlabiyad Hillary Clinton. Wuxuu isku dayayaa inuu difaaco aragtida mucaaradka ee ah in West Virginia ay wali ka jirto arrimo jinsiyadeed isla markaana Obama uu ku lumiyay si fudud sababtoo ah ma uusan lumin waqti ku filan hilib riixaya, aka oo isgacan qaadaya.
Waa inay dan u tahay suuqleyda inay ogaadaan inta ay le'eg tahay saamaynta taas hilib riixaya runti waxay leedahay doorasho. Ololayaasha ayaa aad ugu eg ololaha suuq geynta istaraatiijiga ah ee methamphetamines. Dhammaan dhinacyadu waxay keensadaan aqoonyahanno xisaabeed, waxay gaystaan ​​suuqgeyn waqtigeedii iyo bartilmaameed ah iyada oo loo marayo dhexdhexaadiyeyaal kala duwan, oo ay si adag ugu shaqeeyaan riix hilibka. Suuqyayaashu waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan, wixii ka baxsan wasakhda siyaasadda, in tabahaasi shaqeynayaan.
Maxay tahay inaan ka tiirsanaano ololaha Obama
Inbadan oo naga mid ah waxay iloobaan in Hillary loola dhaqmay sidii Musharaxa Madaxweynenimada 2008 sanad ka hor iyo Barack Obama wuxuu ku jiray liis aad u gaaban oo aan khibrad iyo waayo aragnimo toona u lahayn 'Xisbiga Dimuqraadiga. Dadaalkiisii ​​saxda ahaa ee suuqgeynta ayaa waxtar yeeshay, in kastoo. Hal fiiri goobta Obama waxaadna ka heli doontaa farriin bartilmaameed kasta:
Halkan Indianapolis, waxaan ka helay emayl fayras ah oo aan ku deeqi karo, anigoo qof wakiil ka ah, ololaha. Ololihii Obama wuxuu furay (oo markii dambe la xiray) xafiis 1 xero koonfur ka xiga Circle halkan Indy - prime estate to riix hilibka. Waxaan sidoo kale helay farriimo toos ah ololihii Obama. Markaad fiiriso dhacdooyinka waxaadna ogaan doontaa in Obama uu yahay mashiin gacan-qaadaya, isla markaana leh Dhacdooyinka 16,000 ilaa hada iyo tan kale oo aad u badan.
Ma aaminsani in Obama uu lumiyay West Virginia maxaa yeelay ma uusan gacan qaadin ku filan. Waxaan u muuqdaa inaan ogolaado inuu si fudud u lumiyay sababtoo ah isaga farriintu sifiican uma fariisanin Appalachia.
Ku noqo barta.
Uma dhiirrigelinayo Barack Obama Madaxweynaha, waxaan si fudud u aqoonsanayaa mashiinka suuq-geynta cajiibka ah ee uu dhigay. Wax walba oo ay kooxdiisu sameyneyso waa sax - waxaana muhiim ah in la ogaado inaysan weligood fursad u seegin riixaya hilibka.
Cadaadiska Jirka ayaa ii shaqeynaya
Waxaan ku guuleystay xoogaa dhexdhexaad ah baraha bulshada, gaar ahaan halkan Indianapolis. Si xiiso leh oo ku filan, waxaa jira kuwo badan Bloggers Indianapolis kaas oo hooskiisa aan si dhib yar uga soo dhacayo barta internetka marka la eego. Heer gobol, in kastoo, waxaan aaminsanahay inaan helay magac iyo weji badan oo dadku xusuustaan.
Waxaan ku leeyahay guushayda maxalliga ah riixaya hilibka. Shaqadayda Yar Indiana, Indy Trail Dhaqanka, Guddiga Superbowl ee 2012 iyo ka faa'iideysiga fursad kasta oo lagu baro dadka ganacsatada ah ee maxalliga ah ee ku saabsan Baraha Bulshada ayaa saameyn aad u badan ka sii yeeshay balooggeyga waligiis. Taasi waa kiniin adag oo la liqo oo la siiyo markasta oo aan ku qoro balooggeyga laakiin waxaa muhiim u ah dadka waawayn inay ogaadaan in baloog garaynta aysan ku filnayn!
Ka bax iyo riix hilibka! Blogging-ku wuxuu siiyaa hufnaan iyo daacadnimo in bogga buug-yaraha suuq-geynta uusan bixin karin - laakiin weli ma bixinayso waayo-aragnimada ah in qof isha lagu eego oo la gacan-qaado.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in aan haysto bog aad u ballaadhan oo leh soo-bandhig qaran oo weyn haddii aan awood u yeelan lahaa in aan ka dhigo dhacdooyinka qaranka. Taasi marwalba way adagtahay shaqo waqti-buuxa ah, laakiin wali waxaan rajeynayaa inaan dhowr ka dhigo sanadkan.
Tags: 2008doorashadaqof ahaankulanobamasiyaasaddariix hilibkaKordhinta Iibka
Ma waxaad ku dhibtay Noobs?
Immisa qoraal ah oo Blog ah?
May 28, 2008 at 8: 06 AM
Aragti weyn, dheellitiran, Doug. Boggaaga ayaa maskaxda ku haya maqaal aan akhriyay toddobaadkan la soo dhaafay oo sharraxaya mid ka mid ah madaxdii ololaha ee Senator Clinton oo u ololeyneysa waqti hore in laga soo ururiyo $ 100 midkiiba min 1,000,000 oo haween Mareykan ah.
Waa maxay racfaan weyn! Laakiin soo jeedinta waxaa baabi’iyey lataliye kale oo ololaha doorashada ah. (Waana ognahay musharraxa si guul leh u adeegsanaya lacag-ururin yar: Obama.)
On "riixitaanka jidhka" farsamooyinka internetka: Waxaan u maleynayaa in mid kastaa soo saaro faa'iidooyin kala duwan. Macaamiisha qaar (ama codbixiyaasha) waxaa taabanaya kaliya wacyigalin shaqsiyeed. Kuwa kale waligaa lama xiriiri doontid inaad internetka kahesho mooyee. Kordhinta natiijooyinka waxay qaadataa labadaba.
(Ama, sidii saaxiib hore u dhihi jiray markii la siiyo xulashadiisa vanilj ama jallaatada jalaatada: "Haa!")
May 28, 2008 at 5: 29 PM
Doug: Waan oggolahay gabi ahaanba. Waxaan ku guuleystey amaan badan halkan Atlanta Ganacsatada Webka Atlanta iyo kulanno kale oo laxiriira iyo munaasabado aan kaqeyb galo oo aan ka taageero intii aan awoodey blogkayga. Dheeraad ah, waa wax badan oo faa'iido leh inaad la joogto dadka fool-ka-fool ka badan kali gadaasha kumbuyuutarka iyo shaashadda kombiyuutarka.
May 29, 2008 at 9: 30 PM
Haa, haddaan nahay Warbaahinta 'Truffle Media' waxaan sii wadeynaa inaan goobjoog ka ahaano dhacdooyinka (World Pork Expo waa usbuuca soo socda kuwa xiiseynaya :) oo lagu daray waxaan u isticmaalnaa taleefan duug ah oo caadi ah iyo emayl si aan u taabno saldhigyada.
Waxaan sidoo kale adeegsannaa wadiiqooyin warbaahineed oo cusub si aan ula xiriirno kuwa xiiseynaya beeraha: Twitter (http://twitter.com/trufflemedia), SwineCast.com (iyo boggaga walaasheed ee lo'da, caanaha, digaagga, iyo dalagga) baloogyada / Podcasts, Flickr (http://www.flickr.com/photos/trufflemedia/), iyo Blip.tv (http://trufflemedia.blip.tv/).
Laakiin ma jiraan wax la mid ah joogitaanka qof ahaan si aad u maqasho waxa dadku xiiseynayaan, la sheekeystaan ​​biir gacanta ku jira, oo arag nuurka / luuqadda jirka mowduucyada xasaasiga ah qaarkood (hadhuudhka cuntada ama galleyda shidaalka waa wada hadal caan ah Iowa :)
Mar labaad waad mahadsantahay Doug.
Jun 7, 2008 at 11: 20 PM
Ka dib markaan ku safray 10,000 mayl waddanka oo dhan Safarkayaga Blog, waxaan aaminsanahay awoodda xiriirka shakhsiyeed ee bulshada F2F. Qosolku waa mid aan qiimo lahayn marka loo eego lol.
Jun 11, 2008 at 3: 53 PM
Doug - Dhajinta wanaagsan, ninkeyga. Waxaan ka helay is-gacan qaad wanaagsan iyo dhoolla-caddayn saamayn badan ku yeelanaysa iibka, isku-xidhka iyo dhisidda xiriirka marka loo eego wax kasta oo kale oo aan sameyn karo.
Dhawaan waxaan isku arkay isbedel shaqo, kaliya kan labaad ayaa tan iyo markii aan u soo galay horumarinta ganacsiga waqti buuxa. Markii aan wareysanayay qof walba wuxuu i weydiiyay, “Maxaad sameysaa si aad u dhisatid hoggaan / ganacsi?” Shaki la'aan, shabakadeyda shaqsiyadeed ayaa ah isha ugu weyn ee hogaaminta maadaama aan ka helo tixraacyo iyaga. Tan waxaa lagu sameyn karaa oo keliya iyadoo la keeno qiime iyo isgaarsiin shaqsiyadeed. Waxaan aad u isticmaalaa weedha ah “gacantaada rux” markii aan qof u dirayo. Sidii oo kale, "Waxaan rajeynayaa inaan maalin uun gacantaada ruxmo." Anigu ma ihi taageere ……… “jiidanaya jidhka”. Waxay u egtahay nooc ...